Cumar C/rashiid oo u kala dab qaadaya maamulada Puntland iyo Galmudug ee ku dirisan Magaalada Gaalkacyo!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Cumar C/rashiid oo u kala dab qaadaya maamulada Puntland iyo Galmudug ee ku dirisan Magaalada Gaalkacyo!!
Cumar C/rashiid oo u kala dab qaadaya maamulada Puntland iyo Galmudug ee ku dirisan Magaalada Gaalkacyo!!
Wafdi uu hoggaaminaayo raisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid Cali, ayaa xalay ku hoyday magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug, halkaasoo uu kulamo kula qaatay madaxda maamulka Galmudug.
Ujeeddada socdaalka wafdiga Raisal wasaare Sharma’arke, ayaa waxa uu ku sheegey inay tahay sidii nabad looga dhalin lahaa magaalada Gaalkacyo, loona joojin lahaa xiisadahii gacan ka hadalka dhaliyay ee dhawaanahan ka dhacay Gaalkacyo.
Raiaul wasaarahab ayaa marka uu dhameysto kulamada uu Cadaado kula leeyahay madaxda Galmudug waxaa uu u gudbi doonaa magaalada Garowe oo ah xarunta maamulka Puntland si uu kulamo colaada Gaalkacyo ku saabsan ula soo yeesho madaxda maamulkaasi.
Xiisado iyo dagaalo khasaare geystay ayaa maalmihii la soo dhaafay ku dhexmaray magaalada Gaalkacyo ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug.
Ciidamada labada dhinac ayaa weli isku hor fadhiya goobihii ay ku dagaalameen, daqiiqad walbana la filan karo inuu dagaal bilowdo.
Shacabka ku nool Koonfurta iyo Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa wada inay xaafadahooda ka barakacaan iyagoo ka baqaya in dagaaladan ay saameeyaan, waxaana jira warar sheegaya laga barakacay xaafado hor leh.
Ugu yaraan toban ruux ayaa ku dhintay, qaar kale oo badana wey ku dhaawacmeen dagaalo soo laalaabtay oo todobaadkii dhamaaday si goos goos ah uga dhacayey galbeedka magaalada Gaalkacyo, hub culus ayaana dagaaladaas la isku adeegsaday.
Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku fasahilmay iney xal ka gaaraan dagaaladan, waxayna taa bedelkeed ka badin waaayaan iney hawada isu mariyaan hadalo kulul, iyadoo dhinac kasta uu dhinaca kale ku eedeynayo inuu colaada hurinayo.
Waxa Colaada wax kawada Muumulka ay leedahay Itoobiya kaasoo lamagac baxay Maamulka Dowlad deegaaka waxa ay marar badan weerar kusoo Qaadeen Ciidamada Galmudug balse waxa ay kala kulmeen jabaab iska difaacid weyn intaas kadib Maamulka Itoobiya ay leedahay iyo Putland oo is garabsanaaya Waxa ay weerar kusoo qaadeen Magaalada Gaalkaciyo Qaybta Galmudug waxaana halkaan kasoo soo tabin doonaa Hadalo Cod sir ah laga duubay ciidanka Itoobiya ay usoo dirsatay Gaalkaciyo kuwaasoo qaab baqiil ula Safan maamulka putlant.
Previous PostDaawo muuqaal warbaahinta Jubaland oo sii daysay cod sir ah oo laga duubay Ciidanka Liyuu police ka lasafan putland!! Next PostGurmadyo ciidan oo kala gaaraya dhinacyada ku dagaalamaya Magaalada Gaalkacyo!!